Kedu ka esi tinye weebụsaịtị SEO di iche iche na weebụsaịtị?
N'oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-arụ ọrụ azụmahịa nwere ike ịga nke ọma na-agbaba ụlọ ahịa ma ọ bụ onye ọrụ na Internet. O kwere omume n'ihi nnukwu ike nke Weebụ, na-ekwe ka onye ọ bụla na-ahụ maka ịntanetị nwere ike ịbanye na nde mmadụ nwere ike ịzụ ahịa n'ụwa nile. Ịgwa ndị na-asụ asụsụ dị iche iche okwu gafee ókèala ga-achọ ka ị gbakwunye weebụsaịtị SEO dịgasị iche iche (weebụsaịtị SEO ọzọ).
N'ụzọ dị otú a, na-agba ọsọ dị mma nke nyocha ọchụchọ na ọkwa nke ụwa (nke mba ụwa) nwere ike ịbawanye ngwa ngwa karịa otu SEO dị na ya.Ọ bụghị ikwu na mgbe ị tinyere mba SEO n'ụwa, ị na-emeghe ọnụ ụzọ maka ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche nke ohere dị iche iche maka ọrụ ịntanetị gị (karịsịa ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọrụ azụmahịa brick na-mortar). Iwere ya n'enweghị ihe ọ bụla - mkpa ọ dị iji tinye SEO na ebe nrụọrụ weebụ na-enye ya ohere ịpụta ma gwa ya ka ndị na-ege ntị n'ụwa dum na-adịbeghị anya ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwe ụlọ ahịa n'ịntanetị, dị njikere ma kwadebe maka ihe ịga nke ọma n'ezie.
Nke mbụ, tupu ị nwee ike iji mkpebi dị mma iji tinye SEO na ebe nrụọrụ weebụ, ị ga-achọ ịkwado onwe gị dịka onye ndu na-achị otu niche ahịa. Ozugbo azụmahịa ọhụrụ gị mejupụtara ihe mgbaru ọsọ a bụ isi n'ime asụsụ ọ bụla, ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịga gwa ụfọdụ ndị na - elebara anya na mba ndị ọzọ. N'ụzọ doro anya, usoro ahụ malitere site na ịsụgharị ibe weebụ gị na asụsụ nke abụọ na nke atọ, ebe ị na-eburu n'uche mkpa dị mkpa ịgbakwunye SEO na ebe nrụọrụ weebụ na ọkwa ọkwa asụsụ ọ bụla. Yabụ, ka anyị tụlee okwu ahụ site na nzọụkwụ.
Otu ihe n'otu oge
Ọtụtụ mgbe ụlọ ọrụ na-aga ngwa ngwa ịmepụta weebụsaịtị ha na ọtụtụ asụsụ site na mmalite. N'iche na ị nwere nnukwu ego maka oge mmalite, echiche ahụ nwere ike iyi ụda. Ma ebe a na-abịa ịkpachara anya. Weregodị ya, anyị enwewo ihe ịga nke ọma ịmepụta ụlọ ahịa weebụ nke gosipụtara n'elu nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ (SERPs), dịka ọmụmaatụ n'asụsụ Bekee. Enwere mmesi obi ike na nsụgharị nsụgharị anyị, dịka ọmụmaatụ, sụgharịrị n'asụsụ Spanish ma ọ bụ German, iji rụọ ọrụ? Echere m na ọ bụghị. Ya mere, olee mgbe anyị kwesịrị ịmalite ọganihu nke ọtụtụ asụsụ a? Ekwenyere m na oge kachasị mma bụ mgbe ị maliterelarị ma jisie ike ịnọgide na-enwe ebe nrụọrụ weebụ na-aga nke ọma n'asụsụ Bekee:
Nwee ihe ntanetị azụmahịa nke na-arụ ọrụ nke ọma na Bekee
Tinye ikike lekwasị anya na CMS kwesịrị ekwesị na nhazi weebụ
Mara ihe ịmepụta otu asụsụ ọhụrụ n'otu oge (na-eme nke a, ị ga-enwe oge zuru ezu iji tinye SEO na ebe nrụọrụ weebụ na asụsụ ahụ, ya mere nwee ogo dị iche dị na SERPs tupu ịbanye ọkwa ọkwa ọzọ)
Na-edozi nchọpụta isiokwu kwesịrị ekwesị maka asụsụ ọ bụla ị na-eme atụmatụ ịgbakwunye (n'ụzọ dị otú a, wepụta naanị isiokwu ndị dị mkpa nwere okporo ụzọ ọchụchọ dị elu,
Nsụgharị ọ bụla a sụgharịrị ọhụrụ nke mkpokọta weebụ gị ga-agụnye ma ọ dịkarịa ala otu di na peeji nke ibe gị, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ime (mee ya ngwa ngwa o kwere omume, mgbe ị na-akwalite ibe weebụ gị site na mgbasa ozi njikọ ọtụtụ asụsụ)
Ugboro abụọ check Onye isi ihe niile
Na-aga ọtụtụ asụsụ, ị ga-atụle ịme otu Systems Management System (CMS) n'otu asụsụ dị iche iche.Enweghị m mkpa ijikwa ọtụtụ ọdụ data dị iche iche n'otu oge, dịka m na-atụ aro ka ị na-edebe otu CMS ahụ iji sụgharịa ihe odide gị ugboro ugboro. E nwere ọtụtụ oge Ọdịnaya Management Systems na-ekwe ka ị mepụta ọtụtụ weebụsaịtị na asụsụ dị iche iche na-ekere òkè otu nchekwa data. N'etiti ndị ọzọ, ana m atụ aro iji otu ihe ndị a: Joomla, Magento, WordPress, ma ọ bụ Drupal. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike inwe ezigbo uru, dị ka ndị a:
ebelata ohere nchịkọta, na ego dị ọnụ ala karịa (cheta, Google enweghị ihe dị iche maka ebe obibi gị, dịka njinya search na-eji ihe ịrịba ama ọzọ iji gosi ndị na-ege gị ntị n'ezie)
nke ọma na ngwaahịa na-achịkwa nsụgharị dị iche iche ma ọ bụ ọtụtụ weebụsaịtị
maka nkwukọrịta izu ahia maka ebe nrụọrụ weebụ gị n'otu oge ahụ, ị ​​kwesiri ijikwa redio ma ọ bụ mmepe maka otu
Ana m akwado ịtụle nhọrọ ndị a na-esote iji wuo usoro ntanetị gị:
ngalaba mpaghara ederede na obodo (dịka ọmụmaatụ). de nke Germany)
Ngalaba ọ bụla dị larịị ga-enwe ngalaba sub-ngalaba
Ngalaba nchekwa na-abịa maka ngalaba ọ bụla zuru ụwa ọnụ
Tụlee URL parameters
Jikwaa kuki na-ejikwa asụsụ
Ma mụ onwe m, ịhọrọ mpaghara ederede koodu iji tinye SEO website nwere ọtụtụ uru. Inwe mba geotargeting dị mma maka ịmepụta, dịka a ga-agwa onye ọrụ ọ bụla n'otu oge, na azụmahịa azụmahịa ụwa dị oke mkpa iji na-elekwasị anya na nke ọ bụla na steeti ọ bụla. A sị ka e kwuchara, a pụrụ ịkọwa aha ngalaba nke nwere isiokwu dị mfe maka mba ọ bụla iji mee ka mgbasa ozi n'ịntanetị maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị dị iche iche (dee, nhọrọ a agaghị eme, ma ọ bụrụ na ị na-eme ụfọdụ ọnụọgụ ọtụtụ, nke dịworị lekwasịrị anya n'otu mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụokwu okwu).
Ihe fọdụrụ na njedebe zuru ụwa ọnụ m na-ejikarị SEO nye weebụsaịtị m.
Inwe otu nchekwa data CMS dị oke mma. Ma, ọ ka bara uru ịlele ma ọ bụrụ nhazi zuru ezu zuru ezu. N'ụzọ ahụ, ịnwere ike iji akara hreflang na-agwa Google kpọmkwem asụsụ (ọ bụghị mba) ọ bụ ibe weebụ ọ bụla edere ya.
Na-atụle ụfọdụ nsụgharị dị iche iche, karịsịa gbasara Google na-enweghị mmerụ, ị ga-eji naanị akara ederede kachasị mma maka akụkụ ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ gị.Ma ọ bụrụ na m achọpụta nke ọma, enwere ike ileghara iwu iwu anya mgbe ụfọdụ, ọ bụ naanị na ị nwere ike ịchọpụta ihe. M na-ekwu na ọtụtụ weebụsaịtị na ogo elu na-ejikarị ọtụtụ mkpụrụokwu okwu ma ọ bụ ahịrịokwu na-adịghị mma, nke ka na-egosi na ọ dị ezigbo mkpa ma dabara adaba.Ya mere, enwere m ike ikwu na ị ga-agbaso iwu iwu doro anya maka amaokwu paragraf gị dum, na ebe niile. Naanị cheta na maka Metadata gị, URLs, na Anchor ederede, ị nwere ohere iji tinye uche na mkpụrụokwu okwu ndị a na-achọta nke ọma, kama ha na-asụ asụsụ.
N'ikpeazụ, m ga-achọ ịkọwa ya ọzọ - iji nsụgharị nsụgharị na-emekarị ọtụtụ ihe dị egwu bụ ụzọ kasị njọ isi tinye SEO na ebe nrụọrụ weebụ. Iji mezuo njedebe kachasị mma nke mba maka ntụgharị asụsụ abụọ, ana m akwado inwe naanị nsụgharị weebụsaịtị, nke na-agụnye njikọ njikọ zuru oke na nchọpụta nyocha dị omimi.Akwụsịkwala ịgbalị ịchọta asụsụ dị iche iche n'otu oge, dịka ahịa azụmahịa zuru ụwa ọnụ na-achọ ịntanetị chọrọ ime ihe niile na-aga n'ihu, otu ihe mgbe ọzọ Source .